यसरी गर्न सकिन्छ, मोबाइलमा फोन नम्बर डिलिट हुँदा रिस्टोर ? – Sodhpatra
यसरी गर्न सकिन्छ, मोबाइलमा फोन नम्बर डिलिट हुँदा रिस्टोर ?
प्रकाशित : ८ भाद्र २०७८, मंगलवार २२:३१ August 24, 2021
काठमाडौं : कहिलेकाहिँ कारणवस स्मार्टफोनमा रहेका सयौं सम्पर्क नम्बर गायब हुन पुग्छन् । जसले निकै तनाव दिने गर्दछन् ।
फोन हराउँदा, चोरी हुँदा वा बिग्रिएर अर्को मोबाइल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा कतिपय प्रयोगकर्ताले यस्तो समस्याको सामना गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा हरेक व्यक्तिको नम्बर पुनः खोजेर एक-एक गरेर सेभ गर्नु साँच्चिकै अर्को झन्झटको काम हुन पुग्छ ।